पुरुष वीर्यमा शुक्राणुको कमी, जाँच गराइहाल्नुस, यस्ता गम्भीर परिणाम आउन सक्छ | Rajmarga
पुरुष वीर्यमा शुक्राणुको कमी, जाँच गराइहाल्नुस, यस्ता गम्भीर परिणाम आउन सक्छ
पुरुषहरुको वीर्यमा शुक्राणुहरुको संख्यामा कमीको अर्थ केवल उनीहरुको प्रजनन क्षमतामा प्रश्नको निशान मात्र होइन, बरु यसबाट थाहा हुन्छ कि कयौ अन्य प्रकारका समस्या समस्या पनि छन् भन्ने हो।
एउटा नयाँ अध्ययनबाट यो कुरा स्पष्ट भएको छ कि शुक्राणुहरुको संख्यामा गिरावटले यो भन्छ कि तपाईको शरीरमा सबै कुरा ठिक छैन ।
शुक्रणुको कम संख्या भएका ५,१७७ जना पुरुषमा गरिएको अध्ययनबाट यो कुरा पुष्टि भएको हो । अध्ययनबाट थाहा हुन्छ कि यसमध्ये २० प्रतिशत मानिस मोटोपन, उच्च रक्तचाप र अरु रोगी बनाउने कोलेस्ट्रोलबाट ग्रसित थिए ।
यसका साथै उनीहरुमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनका कमी पनि थियो । यो अध्ययनका अनुसार जसको वीर्यमा शुक्राणुहरुको संख्या कम छ, उनीहरुको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरुको पनि जाँच गराउनु आवश्यक छ।
वीर्यमा शुक्राणुहरुको कमी या वीर्यको गुणस्तरमा गिरावटका कारण हरेक तीमध्ये एक जोडी आमाबाबु बन्ने समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । यो नयाँ अध्ययनमा डाक्टरहरुले इटालीमा खोजविन गरेका हुन्, जुन पुरुषमा प्रजनन क्षमतासँग संघर्ष गरिरहेका छन् उनीहरुको सामान्य स्वास्थ्यमा पनि समस्या हुन्छ ।
अध्ययनका अनुसार जुन पुरुषको वीर्यमा शुक्राणुको संख्या कम छ, उनीहरु मेटाबोलिक सिन्ड्रोमबाट ग्रसित हुन्छन् । उनीहरुको तौल, उचाईको हिसावले बढी हुन्छ र उनीहरुमा उच्च रक्तचापको आशंका पनि कायमै रहन्छ । यसमा मधुमेह, मुटुरोग र स्ट्रोकको आशंका पनि प्रबल रहन्छ ।
यसका साथै उनीहरुमा सामान्यभन्दा १२ गुना कम टेस्टोस्टेरोन हर्मोन हुन्छ जसले यौनेच्छालाई जगाउँछ । यसबाट मांसपेशीहरु कमजो हुने आशंका पनि रहन्छ र हड्डीहरु पनि पातलो हुन लाग्दछ ।
हड्डी कमजोर हुन थाल्छ र चोट लागेको खण्डमा भाँच्चिने सम्भावना पनि प्रबल रहन्छ ।
युनिभर्सिटी अफ ब्रेसामा एन्डोक्रनालजीका प्रोफेसर डाक्टर अल्बर्टो फर्लिनको नेतृत्वमा यो अध्ययन गरिएको हो । उनले भने–प्रजनन क्षमतामा गिरावटको समस्यासँग संघर्ष गरिरहेका पुरुषका लागि महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि उनीहरु यसका साथ कयौ अरु समस्याको पनि सामना गरिरहेका छन् । कुरा मात्र उनीहरुको प्रजनन क्षमताको होइन, बरु उनीहरुको जीवनको हो । प्रजनन क्षमताको मूल्यांकन पुरुषका लागि एउटा राम्रो अवसर हो कि उनीहरुले आफ्नो शरीरका अन्य रोगले पनि समाप्त सक्छ ।
यद्यपि यो अध्ययनका लेखकका अनुसार वीर्यमा शुक्राणुको संख्या कम हुनु मेटाबोलिक समस्याको प्रमाण होइन, तर दुवै समस्या एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् ।
यो अध्ययन टिमका अनुसार टेस्टोस्टेरोनमा कमीको समस्या ती समस्याहरुसँग सिधा छ । डाक्टर फर्लिनका अनुसार यदि कुनै पुरुष आफ्नो प्रजनन क्षमताको जाँच गराउन आउँछ भने उसले सबै स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच गराउनु जरुरी छ।
उनले भने–जुन पुरुष पिता बन्न सकिरहेको छैन, उनीहरुले स्पर्मका साथसाथै अन्य जाँच पनि गराउनु आवश्यक छ।’
कयौ विशेषज्ञहरुका अनुसार यस्तो कमै हुन्छ कि जो स्पर्मको गुणस्तरको समस्या सामना गरिरहेको छ, उनीहरुले शायदै शरीरको अन्य समस्याहरुको जाँच गराउने गर्दछन् । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: के डोनाल्ड ट्रम्पले फेसबुकको बलमा राष्ट्रपति चुनाव जितेका हुन् ? डाटा दुरुपयोगबाट यसरी मच्चिन सक्छ विश्वंस ?
Next post: भारतको एउटा गाउँ, जहाँ दिदीबहिनीलाई गराइन्छ वेश्यावृत्ति, पिता र दाजुभाइ खोज्छन् ग्राहक